Uhlaziyo lwe-Android 10 lushiya iiphikseli zeefowuni ezinqabileyo kwiscreen sokuqala iiyure
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uhlaziyo lwe-Android 10 lushiya iifowuni zePixel ezibandayo kwiscreen sebhokisi iiyure
Uhlaziyo lwe-Android 10 lushiya iifowuni zePixel ezibandayo kwiscreen sebhokisi iiyure
Inguqulelo yamva nje ye-Android, ebeka isiphelo kuGoogle & apos; s isikimu esinegama lokumisa igama, ngoku ekugqibeleni ikhutshelwa kubanini beefowuni zePixel kwihlabathi liphela. Ngokubizwa ngokuba yi-Android 10, ukukhutshwa kwamva kugcwele izinto ezintsha nezinomdla , kodwa ayizukuza ngaphandle kweengxaki ezincinci.
Ngelixa ufakela uhlaziyo lwe-Android 10, uninzi lwabanini bakaGoogle Pixel ziye zanamathela kwizixhobo zazo kwiscreen sebhotile kangangeeyure. Ngaphandle kobungakanani obuncinci bokuhlaziywa kwe-OTA, abanye abasebenzisi baxelile kwifayile ye- Iiforum zemveliso zikaGoogle Iifowuni zabo zePixel zazixhonywe kwiscreen sebhokisi ukuya kuthi ga kwiiyure ezintandathu. Ewe ufunda ilungelo,Ntandathuiiyure!
Umcimbi awubonakali ngathi uphelele kwimodeli ethile, Kwi-Android ekuMbindi Iingxelo, kwaye amatyala axeliwe kuzo zontathu izizukulwana zeefowuni zePixel, kubandakanya iPixel 3a, echaphazeleka ngamaxesha amade ngokungaqhelekanga. Abanye babasebenzisi abachaphazelekayo baxele amaxesha okufakwa naphi na ukusuka kwimizuzu engama-30 ukuya kwiiyure ezintandathu.
Sesi & apos; sele sihlaziye enye yeeyunithi zePixel 3a kunye nePixel 2 ngaphandle kwemicimbi. IPixel 3a yayikhawuleza kakhulu ukukhuphela kunye nokufaka uhlaziyo lwe-1.2GB, kwaye yaqala ukuqala emva kokuhlaziya ngokukhawuleza. I-Pixel 2 yayihamba kancinci kwaye yathatha imizuzu emihlanu kwi-boot yokuqala emva kohlaziyo, kodwa akukho ndawo ikufutshane namaxesha abanye abasebenzisi abakhalaza ngayo kwiiforum zeGoogle kunye neemveliso zeeforamu.
Okwangoku asinalo ulwazi malunga nokuba yintoni enokubangela amaxesha amade okufaka, okanye kutheni kungabasebenzisi abathile abachaphazelekayo.
Ukuba uhlaziya kwakhona ifowuni yakho yePixel kwi-Android 10 kwaye isixhobo sakho sinamathele kwisikrini sokuqala kunye nelogo kaGoogle, ukubheja kwakho okuhle, ngelishwa, kukulinda. UGoogle ukuza kuthi ga ngoku akasibonisanga sisombululo siqinisekileyo kule ngxaki, okanye inkcazo, kodwa Ingcali yeMveliso kaGoogle ingene kumsonto, icebisa abantu ukuba balinde nje. Olunye ukhetho kukuqalisa kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwiscreen sebhokisi (ngokucinezela ivolumu phezulu okanye ezantsi kunye neqhosha lamandla ngaxeshanye) kwaye ukhetheInkqubo yokuphinde ubhuthe ngoku. Oku kuya kufuneka uphinde uyibuyisele kwifowuni yakho kwi-Android Pie. Ukusukela ngoko, ungazama ukufaka uhlaziyo kwakhona okanye ulinde de kubekho isisombululo esisemthethweni esikhoyo.
Nangona kunjalo, uGoogle ucebisa ngokuchasene nendlela yokugqibela, njenge'Ukunyanzelwa kokuqalisa kwakhona ngeli nqanaba kunokuzonakalisa iifayile ezinokuthintela ifowuni ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ibe neyona nto,'Ingcali yeMveliso icacisile kumsonto kwiiforum zemveliso zikaGoogle & apos;
Sifikelele kuGoogle kwaye sizakuhlaziya eli bali ukuba kwaye xa sifumana ingxelo esemthethweni ngalo mbandela.
I-AT & T ibhengeza 'iNomboloSync' engaqondakaliyo ukukusindisa xa ifowuni yakho ingekho
Iincwadana zomsebenzisi we-S7 kunye ne-S7 yomda osencwadini ngoku zibonisa i-Android 7 Nougat interface
I-Samsung Galaxy J3 iyafumaneka ngoku eVirgin Mobile, imihlaba ngoMvulo eBoost Mobile
I-Motorola DROID Turbo 2 kunye neMaxx 2 amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa kwiVerizon